ChaCha weputara Mmemme Mgbakwunye mmekọrịta | Martech Zone
ChaCha weputara Mmemme Mgbakwunye mmekọrịta
Wenezdee, Machị 28, 2012 Tuzdee, Machị 27, 2012 Douglas Karr
Onwere otutu ihe mmekorita nke m nwere ma enwere m oke ihe m na akwalite na blọọgụ anyị na site na mmekọrịta. Enwere nsogbu na-atọ ụtọ ma a bịa na mgbasa ozi mmekọ. Imirikiti ohere mmekọ nwere ike ịdabere na klout gị ma ọ bụ ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ị nwere… ọ bụchaghị dabere na mmetụta gị na ikike ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa.
Mgbakwunye usoro nile bu ebe ma ChaCha malitere ulo oru ihe nke anumanu di iche Mmekọrịta ChaCha. N'adịghị ka mmemme mgbakwunye nke na-eme ka ndị mmadụ kpọsaa mgbasa ozi mgbasa ozi, ChaCha na-eji mmemme mmemme iji mee ka ndị mmadụ kpọọ aha ọdịnaya ha na-elekọta mmadụ… mgbe ahụ kwụọ ha ụgwọ dabere na ndị na-ege ntị na-pịa. Ọ bụ ntakịrị ngwakọ n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa. Ihe mgbaru ọsọ bụ, n'ezie, ịkwọga okporo ụzọ na saịtị ahụ - nke na-emezi ndị na-ege ntị ka ha bụrụ mgbasa ozi na nkwado ego.
M debanyere aha maka usoro ihe omume na nkeji ole na ole wee chọpụta mkpọsa bara uru nke enwere ike izigara ụmụazụ m: Otu esi adighi ada ada na Email Email. Dị ka onye na-ede blọgụ na onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, ana m achọ ọdịnaya ị ga-ekerịta ga-abara ndị na-ege m ntị uru. Nke a bụ enweghị echiche… Achọpụtara m ma ọdịnaya bara uru na A na-akwụ m ụgwọ maka ịkekọrịta ya.
ChaCha n'ezie ramped elu ụfọdụ nka nke na-adịbeghị anya… si na ọ bụ mobile ngwa na Iris, na-eru 2 ijeri ajụjụ zara na-erite uru - Enwere m obi ụtọ na-enweghị atụ maka ndị ọrụ ha. Ha na-arụsi ọrụ ike ma na-agbanye envelopu mgbe niile. Kudos na Scott na ụlọ ọrụ!
Tags: MgbakwunyeMgbakwunye mmemmeChachacontent Marketing
Nzipụta na ụgwọ ọrụ site na mmetụta
Susan Daniels kwuru
Mar 29, 2012 na 7: 43 AM
Aga m elele nke a. Na-achọ ngwaahịa oge niile maka mgbakwunye ngwaahịa. Daalụ. Jiri obi ụtọ, Susan
Douglas mara mma n'oge. Were ikuku nke G +. Ike ndi mmadu na-abia ihe bara uru ma nwekwuo oke • ụdị ụdị ụdị a ga-enwe ọganihu.
Ọ bụ Conor Camplisson
Apr 1, 2012 na 11: 36 PM
A bụ m onye mgbakwunye ugbu a, ọ bụ nnukwu mmemme. Emere m $ 60 n'otu awa mgbe otu njikọ m nwetara ewu ewu na reddit. (Nke ahụ dị obere).
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ onye mmekọ ma mee ezi omume gị maka ụbọchị ahụ, biko biko jikọta njikọ m: http://affiliates.chacha.com/signup/CD10667
Daalụ! ChaCha Ruo Mgbe Ebighị Ebi!
Apr 5, 2012 na 6: 46 PM
Anọgidere m na-agbalị ịbanye, ma ChaCha na-enye m ihe na-esonụ njehie, ọ bụ ezie na enyochalarị m “igbe nkwenye”:
“Njehie: must ga-enyocha“ Kwere na Usoro ”igbe, tupu ị ghọọ Mgbakwunye.”
Apr 5, 2012 na 7: 02 PM
Ana m eche na nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu nchọgharị, Paula. Kedu ihe nchọgharị ị na-eji ma aga m ezigara ndị otu nọ ebe a.